toerana manodidina alaina
fanontaniana toerana manodidina alaina
1 taona 11 volana lasa izay #355 by PADA52
aoka aloha ny milaza fa ianao manome ny asa fanompoana lehibe, anisan'izany ilay "maimaim-poana", toy ny ho liana Afisy sy sary aho! Avy amin'ny tranonkala aho sintonina sasany fiaramanidina, roa ireo mivelatra tsara toy ny Boeing 777-200ER Ultimate entana, saika efa ho aho mampiasa ity fiaramanidina amin'ny volamena FSX haingana fanontana amin'ny fonosana.
Te-manipika fa misy ny Scenery Airport izay alaina aho dia tsy miasa araka ny tokony ho Nanandrana aho izany indrindra roa Airports, tena tsara natao teny an-dalana: Klagenfurt Airport (Aotrisy) sy Richmond International (VA) USA , na manana olana amin'ny fipetrahana ILS rafitra, ny voalohany ny fiaramanidina manohitra fiantraikan'ny zavatra tsy hita maso 30 tongotra ambony piaramanidina 28; ny faharoa indray (Richmond) amin'ny ILS 02 hanao ny fiaramanidina ny sasin-tenin'ny faran'ny fiaingana fa tsy ny fiandohan'ny piaramanidina 02.
Amin'ny toe-javatra roa ireo aho uninstalled Scenery vaovao ary samy ILS miasa tsara.
Mety manana vahaolana ho an'ity izay tsy fantatro.
Fotoana mamorona pejy: 0.404 segondra